महेशको ‘महागुरु’ सार्वजनिक – Pahilo Page
महेशको ‘महागुरु’ सार्वजनिक
१ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०५:१४ 3183 पटक हेरिएको
काठमाडौं । पत्रकार तथा साहित्यकार महेश राणाको पुस्तक महागुरु सार्वजनिक गरिएको छ । एबीसी टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका राणाको ‘महागुरु : काल भैरवसँगको संवार्ता’ काठमाडौंमा शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
डा. ध्रुवेशचन्द्र रेग्मीको सितारमा भैरव आराधनाबाट सुरु भएको विमोचन पूर्ण रुपमा तान्त्रिक प्रक्रियाको बीचमा काल भैरवको प्रतिरुपद्वारा पुस्तक लोकार्पण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली कर्पोरेट, विजनेस, सेक्युरिटी सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति थियो ।
पुस्तक समीक्षा शेखर खरेलले गरेका थिए । सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष रवि केसी, सिटिजन बैंकका सीइओ राजनसिंह भण्डारी, फिसटेल एयरका अध्यक्ष विकास राणा, आनका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल ‘शशी’ इ–क्यानका अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डे, नायक निखिल उप्रेती, अष्ट्रेलियन हार्वर इन्टरनेशनल कलेजका अध्यष सुमन भेटवाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए ।
धार्मिक र आध्यात्मिक बिषयवस्तु समेटिएको पुस्तकमा नौं उपशीर्षक रहेका छन् । पुस्तकमा मानिसको भौतिक अवस्थालाई कसरी आध्यात्मिक बनाउने भन्ने विषयमा भगवान काल भैरवसँग गरेको अन्तर सम्वादलाई उतारिएको छ ।
पुस्तकमा जीवनलाई रुपान्तरण, आध्यात्मिक साधन आदिलाई विशेष जोड दिइएको छ । लेखक राणाले आफुले पुस्तक लेखेको भन्दा पनि साधनाबाट महागुरुले दिएको बिचारलाई प्रस्तुत गरेको बताएका छन् ।
पुस्तकलाई पिनाकल पब्लिकेशनले बजारमा ल्याएको हो । कार्यक्रममा प्रकाशकको तर्फबाट पिनाकल पव्लिकेशनको तर्फबाट धनिराम वलीले स्वागत मन्तव्य राखे । कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चारकर्मीद्वय प्रभात रिमाल र नरेश भट्टराईले गरेका थिए ।
मालिका केशरीले ल्याए उपन्यास कृति “टुङाल”
डिस होम बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता २०७८ मा भाग लिने कि ?
अर्काकी गर्लफ्रेण्डलाई लभलेटर लेख्दालेख्दा प्रकाश भए यस्तो
एसइइको नतिजा आजै, यसरी हेर्नुहोस् नतिजा
दोस्रो कृति “ब्लु डायरी” लिएर आउँदै कृष्ण आचार्य